Indawo yokuhlala ebanzi nephephile wena nomndeni wakho. - I-Airbnb
Indawo yokuhlala ebanzi nephephile wena nomndeni wakho.
Lechería, Anzoátegui, i-Venezuela
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Gustavo Enrique
YiPent House (PH) enhle, enomoya we-AA kuzo zonke izindawo, iWiFi, i-cableTV, i-swimming pool yabantu abadala nenye eyezingane, inezindawo zokupaka ezimboziwe zemoto, nendawo yokupaka isikebhe esiteshini esikhulu, indawo yokuhamba ngezinyawo umbono omuhle. Njengoba kunendawo enhle, eduze neMeya ye-CC Plaza kanye nezindlela ezinkulu, izindawo zokudlela namabhishi edolobha, ngokuvikeleka kwamahora angama-24 kuphephile emsebenzini noma ukuvakasha kwezokuvakasha. Itholakala esitezi sesi-3 ngekheshi futhi ibeke ithangi lamanzi.
Yindlu yokulala engu-3 ene-Queen bed ngalinye. 3 okugeza okugcwele. Lav / umzuzwana, ikhishi elinezitsha. I-Wifi, i-Intercable, ithange lamanzi elingu-1000-litre elimpompa uma amanzi kamasipala egeleza, amanzi ashisayo, izindawo zokupaka ezimbili, kanye nedokodo lokuphuma ukuyoshaywa umoya emiseleni. Inamachibi okubhukuda amabili kanye nokungena emigwaqweni emikhulu yedolobha. Itholakala eduze kwe-CC Plaza Mayor. etholakala esitezi sesi-3 esingafinyelelwa ngekheshi.
I-Pelícano condominium isendaweni yokuhlala futhi ephephile. Indawo yenhlalo ye-condominium ivulekile futhi iluhlaza. Unokufinyelela esiteshini esikhulu saseLechería, futhi unenketho yokuthatha izimoto ezimbili ukuze uzipake. Uma unemoto yesithathu, kufanele uyazise ngaphambi kokuyibhukha.
Ibungazwe ngu-Gustavo Enrique
Efulethini uzothola uhla lwemibhalo olunezinombolo zocingo zami kanye ne-co-host. Bazokwazi ukuxhumana uma kwenzeka beyidinga.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lechería namaphethelo